Ururka caafimaadka aduunka oo ka digey khatarta daawo uu qaato Taram - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ururka caafimaadka aduunka oo ka digey khatarta daawo uu qaato Taram
Ururka caafimaadka aduunka ee xagjir Taram u diidey inuu siiyo lacagtii ku waajibtey ayaa sheegay inay ka digayaan daawo uu qaato Taram marna xayaysiiyo oo uu u cuno cudurka Kooro. Daawadaas oo lagu magacaabo hydrokoloriin oo looga hortago kaneecada ayaa ururku sheegay inay leedahay halis caafimaad.
Bukaanada qaar ayaa la sheegay inuu wadnuhu ku gariirey qaarkoodna ku dhinteen. Ilaa hadda makirto daawo la sheegay inay daawayso cudurka Kooro aan ka again daawo dhaqameedyo lagu sheegay Afrika iyo in la adkeeyo difaaca jidhka.
“Dib ayaan u fiirinay daawadaas waxana noo soo baxdey inay halis ku tahay caafimaadka markaasi waan ka saarney liistada daawooyinku lagu tijaabin karo dadka qaba cudurka Kooro ayuu yiri afhayeen u hadley ururka.